Gacanta. Sidee loo tuuri karaa adoo iibinaya dhagax?
Gemstone iyo iibiyeyaasha dahabka ah waxay isticmaalaan farsamooyin farsamo badan si ay kuugu qanciyaan inaad iibsato. Muhiim maaha haddii aad tahay qof sabool ah ama mid xun. Waxay helayaan hab laguugu qanciyo, ka daawo ilaa ay arki doonaan xiddigaha bilaabay inay indhahaaga ku iftiimaan. Waxay kuugu sharxi doonaan, si ay kuugu soo celiyaan lacagta aad ku leedahay jeebkaaga.
Gemstone iibiyayaashu maaha cilmi baarayaal
99.99% ee iibiyayaashii dhagaxleydu maaha aqoonyahanno. Waxay yihiin kuwa iibiya, waxay u tababaran yihiin inay dhagaxyo iibiyaan dhawr saacadood ama maalmo yar, ugu fiican. Ma jiraan saaxiibo halkaas ah. Waxay kuugu eegayaan sida kaliya ee lagu heli karo lacag.
Sida ugu wanaagsan ee lagu iibsado dhagax ama jawharad waa in aanad dhegeysan doodaha iibiyeyaasha, kaliya aad ku tiirsanaato waxa aad taqaanid iyo waxa aad aragto. Iibiyeyaashu ma joojin doonaan inay ku taabtaan dareen ahaan, inay ku dhaqaaqaan. Marka, iska caabi, dhageyso dareenkaaga macquul ah.
Qabsashada dukaamada yaryar
Aynu ku bilowno khiyaanooyinka dukaamada yaryar, miinooyinka ama aagga wax soo saarka dhagaxa.
Waa kuwan tusaalooyin qaarkood
Haddii iibiyuhu kuugu deeqo qiimo dahab ah ama dhagax, isla markiiba wuxuu bixiyaa qiimaha nuska ah, waa inaad ka sii fiicnaataa.
Is weydii: haddii aad tagto makhaayad, iibsato guri, digaag ama dubaax daawada ilkaha, miyaa laguu soo bandhigi doonaa qiimo dhimis ah 50 iyada oo aan la soo bandhigin calaamad bandhigeed? Jawaabtu waa maya. Wax macno ah ma samaynayso, maaha wax dhagax xaqiiq ah ama been ah, waa lagaa saari doonaa.
Tijaabinta dhagaxyada, kulaylka dhagax, dhagaxa xayawaanka kale, iwm.
Dhamaan wax macno samaynaya. Taas oo ah ka kooban kiimikada dhagax isku dhafan oo la mid ah dhagax dabiici ah. Waxay u muuqan doontaa sida saxda ah dhagax dhab ah dhammaan tijaabooyinka ay qaadan doonaan.
Is barbardhig dhagxan dhagxan si gabal quraarad ah
Si ay kuu khiyaaneeyaan, iibiyeyaashu waxay isbarbar dhigayaan dhagxaanta macmalka ah iyo hal galaas. Aan u hadalno tusaale ahaan Ruby. Ruby waa dhagax cas oo ka socda qoyska corundum. Isku-darka kiimikada badanaa aluminium oksaydh. Ruby synthetic ayaa sidoo kale lagu sameeyaa isla kiimikada ka kooban midka dhabta ah. Waxay ula dhaqmi doonaan si isku mid ah dhammaan imtixaanada lagu tusi doono adiga. Iibiyeyaashu waxay isbarbar dhigi doonaan 2 dhagax: ruby ​​synthetic iyo gabal galaas casaan ah. Isagoo sharaxaya inay yihiin laba dhagax oo kala duwan, muraayaddu waa dhagax been abuur ah iyo in ruby-ka synthetic uu yahay dhagax dhab ah. Laakiin waa been. Labada dhagax waa been abuur mana laha qiime, sidoo kale.
Qabsashada dukaamada quruxda badan
Hadda, tusaale ahaan dukaanka quruxda badan, riwaayad raaxo ah, suuqa dukaameysiga ama maddaarka.
Sellers ma isku dayi doonaan inay ku qanciyaan in dhagaxyada ay run yihiin dhagaxyada dhagaxyada ama dhimista ganacsiga. Farsamada loo isticmaalo kiiskan waa mid aad u macquul ah: muuqaalka iyo waxyaabaha luuqadaha.
Yaa ka shakisan in dukaanku uu muuqaalkeedu yahay mid aad u qurxoon, oo ka buuxa dukaamo qurux badan oo dharka wanaagsan leh, dhab ahaantii iibinta alaab been abuur ah?
Samee tijaabooyin adoo waydiinaya su'aalo. Haddii aad si taxaddar leh u dhageysatid jawaabaha, waxaad fahmi doontaa weedhaas si wanaagsan loo xasuusto. Sida jawaabaha duulimaadyada, ama sidoo kale wac xarunta martigelinta.
1 Su'aal: Ma iibin dhagaxyada dabiiciga ah?
Jawaab: Madam, Tani waa crystal dhab ah.
Ereyga macdanta ee muraayadda waxaa loola jeedaa waxyaabo hufan. Tani macnaheedu maaha in dhagaxu yahay mid dabiici ah ama dabiici ah.
2 Su'aal: Miyuu dhar guduudan yahay?
Jawaab: Marwo, waa bir qaali ah.
Waxay tiri "haa" iyo "maya" midna. Kaama jawaabin su'aashaadii.
Ereyga "bir qaali ah" sidoo kale macno sharci ma leh. Xaqiiqdii, dukaankani wuxuu iibiyaa dahabka laga sameeyay macdanta birta ah ee aan ku jirin lacag, dahab, ama bir kasta oo qiimo leh.
Sida aad arki karto, ma jirto hab mucjiso ah oo looga hortagi karo in la xakameeyo. Dareenkaaga guud waa difaacaaga ugu fiican.
Haddii aad xiiseyneysid kulankan, waxaan dooneynaa in aan ka soo baxno aragtida si aan u shaqeyno, waxaan soo bandhignaa koorsooyinka maraakiibta.
20% Qiimo dhimis lagu sameeyo moonstone.
* waxaa la heli karaa ilaa Abriil 30, 2021